DAAWO:- Feysal Waraabe oo si xun Ucaayay Beesha Cali Saleebaan ee Puntland “Meesha Kaluun lama Aruursanayo” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Feysal Waraabe oo si xun Ucaayay Beesha Cali Saleebaan ee Puntland “Meesha Kaluun lama Aruursanayo”
Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Somaliland ee UCID Eng.Feysal Cali Waraabe ayaa si kulul uga jawaabay hadal dhawaan kasoo yeeray wasiirudowlaha Maaliyadda Somalia Maxamuud Xayir Ibraahim kaasi oo shirkii garoowe ka sheegay in deni looga baahan yahay inuu ku duulo Somaliland.
Feysal Waraabe ayaa si adag uga jawaabay hadalkiisa isagoona yiri “Isagoo Cali Saleebaan ayuu inoo hanjabayaa, waligeed lama sheegin Cali saleebaan meel ay dagaal ku galeen, Meesha kaluun lama uruursanyo”.
Previous articleDAAWO:- Axmed Karaash iyo Ciidamo badan oo gaaray Furimaha Dagaal Gobolka Sool + Abaabul dagaal oo bilaawday
Next articleAKHRISO:- Maxaa kusoo kordhay Cudurka Coronavirus oo dunida qalqal geliyay “Tirada Dhimashada saxda ah”.
Boodhari March 24, 2020 At 11:42 pm
In marka nin Ciidagale ahi naarta jahannamo lagu shalwinayo ay boqol kun oo Cali Saleebaan ahi Jannada ku xaroonayaan waa wax aanu awal ba shaki ku jirin Faysal Dhurwaayoow waayo cawaan uun baa ku faanta in ay tahay dhiig miirato kuwa agtooda awliyada ka ah wax ka sheegta.
Ahmed mooye March 25, 2020 At 11:10 pm
Hello feysal doqn wa Lu yaqanh ina dumarka iyo rag isku geyni jirdey feysal doqn ha is Qarin ina ja jus ahad wa lago yahy feysal doqn mantay Miya nin ficn iska dhigah feysal doqn ord mesha naagah rag ugani jirdey wa laqayanh ha is qarin feysal doqn Cali salaman wey ka fican yahin 100kiba 100 feysal doqn afara hoda kabaxah ok feysal doqn aabah ki gabah toli jirey was iyo ja juska tahay was